Sawiro:-Booliska dalka Kenya oo qobtay laba qof oo looga shakiyay in aay xiriir la leyihiin Al-shabaab - Hablaha Media Network
Sawiro:-Booliska dalka Kenya oo qobtay laba qof oo looga shakiyay in aay xiriir la leyihiin Al-shabaab
HMN:- Booliska dalka Kenya ayaa Magaalada Mombaza ku xiran labo qof oo si weyn ay u baadigoobayeen , islamarkaana la aamin san yahay in ay xiriir toos ah ay la leeyihiin Al-Shabaab.
Labada qof ee ay xireen Booliska dalka Kenya ayaa la sheegay in ay u safreen dalka Suuriya oo ay dib uga soo laabteen , islamarkaana ay kasoo qeyb qaateen dagaallo ka dhacay dalkaasi sida ay sheegeen Saraakiisha Ammaanka dalka Kenya.
Labada qof mid ka mid ah ayaa ah Haweenay waxaana lagu Magacaabaa Nasra Hyder Faiz
waxaana la sheegay in ay dhalatay 1991 dii , islamarkaana ay kasoo qeyb qaadatay Weeraro Argagixiso oo ka dhacay gudaha dalka Kenya.
Salim Mohamed Rashid oo dhashay 1996 ayaa sidoo kale la sheegay in uu u safray dalka Suuriya oo uu kasoo barbar dagaalamay Kooxda Daacish.
Dowladda Kenya ayaa sidoo kale sheegay in ay suurtagal tahay in wiilkaan iyo Gabadhaan ayaa sidoo kale doonayay in ay Tashkiiliyaan dhalinyarada Doonaysa in ay ku biiraan Al-Shabaab iyo sidoo kale ururka Daacish ee ka dagaalamo dalka Suuriya iyo Iraaq iyo dalka Liibiya iyo dalka Yemeen.